Gaelle – Mizara fitiavana amin’ny alàlan’ny firotsahana an-tsitrapo mba hampandrosoana an’i Madagasikara – Blaogin'i Voniary
Gaelle – Mizara fitiavana amin’ny alàlan’ny firotsahana an-tsitrapo mba hampandrosoana an’i Madagasikara
Fitiavana mandehandeha raha I Gaelle na Ramamonjisoa Tsanta Gaelle: fitiavana ny fianakaviany sy ny olona rehetra, fitiavana ny asa ataony ary fitiavana an’i Madagasikara. Ny fiainany manontolo no entiny ijoroana vavolombelona satria rehefa misy zavatra hitanao hoe tsara tokony halain-tahaka, hoy izy, dia fadiana ny mibaiko fotsiny fa tonga dia ianao mihitsy no mila manao modely voalohany mba ho hitan’ny olona ny soa azo. Amin’izao andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy izao, izara sombiny kely amin’izany fiainany izany ity andriambavilanitra ity. Manasa anao ary hamaky hatramin’ny farany.
Voniary: Mpirotsaka an-tsitrapo no tena ahafantarana an’i Gaelle, inona no nandrisika anao hanao izany?
Gaelle: Izaho resy lahatra hoe fitaovana isika olombelona eto an-tany. Mizara fitiavana amin’ny alàlan’ny firotsahana an-tsitrapo mba hampandrosoana an’i Madagasikara no tsapako hoe antsoko eto an-tany. Tiako ilay izy dia ataoko na dia sarotra aza indraindray.
Nisy zava-niseho indray mandeha izay anisany mandrisika ahy hanao asa soa sy hirotsaka an-tsitrapo hatramin’izao. Nanentana ankizy teny Ivato izahay tamin’izay. Navorinay teo amin’ny toerana iray ireo ankizy zanakin’ny sahirana teo amin’ny manodidina. Hitako tsara ny endrik’izy ireo tamin’ny vao tonga teo. Fa nony nampilalaovinay izy ireo dia niova tanteraka ny tarehin’izy ireo: feno tsiky sy falifaly. Teo no nahatsapako fa na fihetsika kely fotsiny aza, ao anatin’ny fotoana fohy dia afaka manova zavatra, mitondra fifaliana eo amin’ny fiainan’ireto ankizy ireto. Tohina mafy ny foko tamin’izay ary nilatsa-dranomaso mihitsy aho. Dia hoy aho anakampo hoe “tsy hijanona intsony aho fa tsy maintsy tohizako foana izao zavatra ataoko izao”.
V: Mety nisy traikefam-piainana tany aloha nanamarika anao koa angamba nahatonga anao tia ny hafa e?
G: Ie, tamin’izaho mbola kely, efa nampanahy ny rehetra mihitsy ny hoaviko satria vao 6 taona aho no maty i mamanay ary nanomboka teo dia lasa ratsy be ny naotiko tany am-pianarana. Nisy mpampianatra iray izay tsaroako mandrakizay ny zavatra noteneniny tamiko: « dondrom-paty »; sady natosiny mafy be ny lohako teo imason’ny ankizy rehetra. Menatra, nalahelo ary te hisitrika mafy tao ambany gorodona aho tamin’izay satria tena vasoka tanteraka teo imason’ny mpiara-mianatra rehetra. Noraisiko lasa angovo nampandroso ahy tamin’ny fiainana anefa iny fihetsika sy teny nandratra fo iny kelikely taorian’izay.
Hafaliana miaraka amin’ny fianakaviana sy ny namana
Nianatra nahafantatra tsikelikely ny momba ny tenako manokana aho nandritra izay fotoana izay. Lasa zary fomba fiainako ary fomba fisainako nandrapaha-lehibe mihitsy moa ilay hoe mitady ny « soa » ao ambadiky ny zavatra rehetra mitranga, na sarotra aza indraindray. Tsaroako foana manko ity teny ity “Satria malala eo imasoko ianao, eny, be voninahitra ianao sady tiako”. Fanampin’izany koa ny hoe “tiavo ny namanao tahaka ny tenanao”. Ny tenako aloha izany no ezahiko tiavina voalohany avy eo zaraiko amin’ny hafa ny fitiavana.
V: Ary ilay fitiavana ny maha-Malagasy?
G: Izaho manokana olona tena mankamamy an’I Madagasikara na dia mandalo fotoan-tsarotra aza ny firenentsika. Ny adiresy mailako, tsy niova mihitsy hatramin’ny voalohany: “gaellelovesmada…”(tia miteny anglisy koa aho).
Rovan’i Manjakamiadana – Vakoka Malagasy
Ny fiteny koa, tena iezahako ny miteny gasy madio rano na any amin’ny facebook aza, nividy boky izay mihitsy ary aho ianarako ny tsipelina sy fitsipi-pitenenana Malagasy. Ny fahafantarana ny nosintsika koa tsy ataoko ambanin-javatra, izany no anisany itiavako ny “volontourisme” izany hoe sady manao asa firotsahana an-tsitrapo no mizaha tany.
Tsy aritri’ Gaelle mihitsy ny tsy haka sary miaraka amin’ireto biby mampiava an’i Madagasikara ireto
Ny fitafy indray, tsy maintsy misalotra zavatra Malagasy foana aho isaky ny mivoaka: na poketra io, na satroka, na lamba landy. Fanahy iniako novidiana mihitsy ireny na lafobe aza. Fa izaho kosa aloha tsy karazana hanao tanaivoho e! Fa ireny pitsopitson-javatra ireny no anehoako ny maha-Malagasy ahy, ary tena sarotiny aho.
Gasigasy tokoa e!
V: Hafatra manokana ho an’ny vehivavy amin’izao 8 Martsa izao?
G: Amiko aloha tsy tokony hamaritra ny fandraisana andraikitra ny maha-lahy sy maha-vavy. Rehefa misy zavatra hitanao fa tianao sy mahasoa anao dia ataovy na dia lazain’ny fiarahamonina aza hoe tokony lehilahy no manao an’io. Toy izany ohatra izao ny manosika fiara, rehefa hitako fa ilaina aho dia miara-manosika amin’ny lehilahy eo aho na dia misy manatsatso aza hoe “ianao izay vehivavy kely io!”.
Izao koa « na iza na iza eto ambony tany dia manana ny maha-izy azy daholo; na izaho na ianao, na izay heverin’ny olona ho « tsy misy fotony indrindra eto an-tany aza » dia mbola manana ny « maha-izy azy » koa dia iny maha-izy azy iny indrindra no tokony fantariny ary trandrahany mba hamirapiratra izy.
fampivelarana ny maha-olona, firotsahana an-tsitrapo, fitiavan-tanindrazana, Gaelle YALI, maha-izy-azy, Malagasy volunteer, Mizara fitiavana, Tsanta Gaelle
Hafatra – Amboaran-tonokalo nosoratan-dRasamy